‘ओलीका अडान मौसमी नै हुन्छन्’ - संवाद - नेपाल
नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनका अगुवा हुन्, पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका पूर्वअध्यक्ष झलनाथ खनाल । इलाम–१ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित उनी पार्टीभित्र वैचारिक दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्ने सबल नेताहरुमध्ये एक मानिन्छन् । तिनै खनालसँग पार्टी एकीकरण प्रक्रिया र राष्ट्रपति पदमा उनले देखाएको चाहनामा केन्द्रित रही नेपालले २५ माघ बिहान गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश:
पार्टी एकीकरणका लागि हामीले एकता संयोजन समिति निर्माण गर्‍याँै । यो समितिको बैठक अपेक्षा अनुरूप भइरहेको छैन । एकीकरणका लागि हामीले कार्यदल पनि बनायौँ । तर, यसले पनि साकार रूप लिएको छैन । केही ढिलाइ भएको हो । तर, कुनै पनि बेला पार्टी एकीकरणको घोषणाचाहिँ हुन्छ ।
हालै भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजको अकस्मात् भएको नेपाल भ्रमणका कारण पनि पार्टी एकीकरण प्रक्रिया ‘अब टाढाको विषय’ हो भन्ने एकथरीको आशंका छ, के हो ?
यसमा बिलकुल सत्यता छैन । किनभने, हामीबीचको एकतालाई प्रभावित पार्ने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र केन्द्रीय कडी भनेका हाम्रा पार्टीका कार्यदिशा, नीति र सिद्घान्त हुन् । यसमा दुवै पार्टी निकै निकट आइसकेका छन् । एकाध विषय होलान्, टुंगो लगाउन बाँकी ।
एमाले अध्यक्ष केपी ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बीचको पदीय बाँडफाँटचाहिँ कसरी हुन्छ ?
पार्टी एकीकरण गर्दा कार्यदिशा, नीति र सिद्घान्तमा एकरूपता भयो भने अरू सबै कुरा गौण हुन्छन् । संगठनात्मक संरचनाका बारेमा पनि लचिलो ढंगले हेर्नुपर्ने हुन्छ । पार्टीको नेतृत्वको संरचना कसरी बन्ला भन्ने सन्दर्भमा अनेकौँ विकल्प छन् । जस्तो : एक जना प्रधानमन्त्री र दुई जना पार्टी–अध्यक्ष, एक जना प्रधानमन्त्री र अर्को अध्यक्ष, एउटा प्रधानमन्त्री र अर्को अध्यक्ष मण्डल । यसमा हामी छलफलका क्रममा छौँ, एउटा निष्कर्षमा पुग्छौँ । दुवै पार्टीको भावनालाई एक ठाउँमा ल्याउने गरी हामी मिलाउँछौँ ।
तर, एमालेभित्रको संस्थापन पंक्ति भने ओलीलाई पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री दुवै पद दिनुपर्छ भन्ने पक्षमा छ । यो पंक्ति माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई पार्टी बुझाउन सकिँदैन पनि भन्छ नि, होइन ?
पार्टीको एउटा पद कसैलाई दिनेबित्तिकै पार्टी बुझाइएको भन्ने हँुदैन । कम्युनिस्ट पार्टी भनेको सामूहिक नेतृत्वका आधारमा अघि बढ्छ । र, अहिले जो हाम्रो पार्टी अध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँ एक्लैले मात्र सिंगो पार्टी हाँकेको होइन । अहिले पनि सामूहिक नेतृत्वका आधारमा यो पार्टी चलिरहेको छ । त्यसैले जोसुकै नेतृत्वमा भए पनि पार्टी सामूहिक निर्णयका आधारमा चल्छ । तसर्थ, पदकै निम्ति कुनै ठूलो हंगामा मच्याउनुपर्ने मलाई लाग्दैन ।
तपाईंले ओली र प्रचण्ड दुवैलाई नजिकबाट चिन्नुभएको छ, एकीकृत पार्टीको कार्यदिशा, नीति र सिद्घान्तलाई कसले राम्ररी हाँक्न सक्छ भन्ने लाग्छ ?
यो प्रश्नको जवाफका लागि मथिंगल धेरै दुखाउनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । किनभने, हामीले सामूहिक नेतृत्वको अभ्यासलाई अगाडि बढाउनुपर्छ । अहिले एकीकृत पार्टीको अध्यक्षता गर्न सक्ने व्यक्तिहरू एमाले र माओवादीमा धेरै जना छन् । उहाँहरू दुई जना मात्र होइन । महासचिव र अध्यक्ष भएर मैले पार्टीको नेतृत्व गरिसकेको छु, मै पनि फेरि आँट गर्न सक्छु, पार्टी अध्यक्षका लागि । माधव नेपाल, वामदेव गौतम पनि हुनुहुन्छ । अरू नेताहरू पनि छन् ।
तपाईंलाई सम्झना होला, विसं ०७० को संविधानसभाको निर्वाचनपछि भएको एमालेको संसदीय दलको नेता छनोटका क्रममा हालका पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीले ‘एक व्यक्ति एक पद’ को अडान लिनुभएको थियो । अहिले पनि उहाँ त्यही अडानमा हुनुहुन्छ कि फेरिसक्नुभयो ?
उहाँका अडान मौसमी नै हुन्छन् । उहाँले त्यतिबेला जे आवश्यकता देख्नुभयो, त्यही अडान राख्नुभयो । अहिले पनि त्यही अडानमा हुनुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । धेरै नेताहरू भएको अवस्थामा ‘एक व्यक्ति एक पद’ पनि एउटा सूत्र हो ।
तपार्इंले एमालेले अहिले अंगीकार गरेको राजनीतिक कार्यदिशा ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ (जबज)लाई ‘दक्ष प्रजापतिको टाउकोजस्तो’ भनेर टिप्पणी गर्नुभएको थियो । अब एकीकृत पार्टीको राजनीतिक कार्यदिशा के हुन्छ ? के जबजले नै निरन्तरता पाउने हो ?
मैले जबजलाई दक्ष प्रजापतिको टाउकोजस्तो भनेको होइन । नयाँ जनवादलाई छोडेर जनताको बहुदलीय जनवाद किन बनाउने भन्ने मात्र प्रश्न गरेको हुँ । नयाँ जनवाद भनेको नै जबज हो भनेर प्रस्ताव राख्ने नै म हुँ । जबजबाट जसरी एमाले मार्गनिर्देशित भएर आएको छ, अहिले सिंगो देश नै त्यो ठाउँमा पुगेको छ । माओवादी पार्टी पनि जबजबाटै निर्देशित हुने ठाउँमा छ । आगामी दिनमा एकीकृत पार्टीले पनि जबजलाई मान्नु अनिवार्य छ ।
फेरि एकपटक भारतीय विदेशमन्त्रीको सन्दर्भ, उहाँको भ्रमणले तपार्इंहरूको पार्टी एकीकरण मात्र होइन, समग्र राजनीतिक समीकरणमै फेरबदल हुने अनुमान पनि गरिँदैछ, के भन्नुहुन्छ ?
म भारतीय विदेशमन्त्रीको भ्रमणलाई धेरै उछालपछाल गर्ने पक्षमा छैन । यसभन्दा अघि नेपाल–भारत सम्बन्धमा चिसोपन आएकै हो । भारतले हाम्रो देशका विरुद्घ नाकाबन्दी गरेकै हो । यी तथ्यको पृष्ठभूमिमा जुन महानिर्वाचन भयो, त्यसबाट नयाँ परिस्थिति जन्मिएको छ । वामपन्थी शक्तिहरूले बहुमत प्राप्त गरेका छन् । यो शक्तिले कस्तो नीति लेला ? भारतसँगको सम्बन्ध कसरी अघि बढाउला ? यी प्रश्नहरू हाम्रो छिमेकीकहाँ पनि उत्पन्न भएका छन् । स्वाभाविक रूपमा नयाँ परिस्थिति अनुरूप समझदारी निर्माण गर्नका लागि, वातावरण बनाउनका लागि पनि छिमेकीहरूले प्रयत्न गर्नु
अबको प्रधानमन्त्रीको पहिलो विदेश भ्रमण भारतबाटै प्रारम्भ हुने वातावरण निर्माणसँग पनि यो भ्रमणलाई हेर्न सकिन्छ ?
नेपालमा जब नयाँ सरकार बन्छ, नयाँ प्रधानमन्त्रीले भारतकै भ्रमण पहिला गर्नुपर्छ भन्ने अवधारणा रहिआएको छ । यसलाई हामीले परम्पराको रूप दिनु हँुदैन । यसलाई नीतिको रूप पनि दिनु हँुदैन । र, यसलाई सधैँभरि पालना गर्नैपर्ने नियमका रूपमा त झनै लिनु हँुदैन । नेपाल एउटा स्वतन्त्र, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न र राष्ट्रिय अखण्डतायुक्त मुलुक हो । हामी आफ्नो आवश्यकता अनुरूप, हाम्रो विदेश नीति अनुरूप हाम्रो प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि देशको पहिलो भ्रमण गर्न सक्छन् । यो कुरालाई ध्यानमा राखेर अबदेखि हामी अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ । त्यसमा कुनै मोलतोल नहोस् भन्नेप्रति हामी सबै सचेत हुनुपर्छ । आउने सरकारले त अझै बढी नै सचेत हुनुपर्छ ।
अब हुने प्रधानमन्त्रीले यस्तो साहस गर्नुहोला र ?
अब आउने प्रधानमन्त्रीले कतिपय शंकाजन्य परम्परा जुन छन्, तिनलाई तोड्ने, दुईवटा देशका बीचमा ऐनाजस्तै छर्लंग देखिने गरी सम्बन्ध विकास गर्नुपर्छ । मुलुक सानो होस् वा ठूलो तर सार्वभौमसत्ता कहिल्यै पनि सानो वा ठूलो हुँदैन । संसारका प्रत्येक देशको सार्वभौमसत्ता बराबरी हुन्छ । यी कुराहरूलाई स्थापित गर्ने ढंगले अगाडि बढ्यौँ भने त्यो राष्ट्रका निम्ति दीर्घकालीन रूपले कल्याणकारी हुन्छ ।
फरक प्रसंग, तपाईंले राष्ट्रपति पदमा चाहना देखाउनुभएको बुझिन्छ । के आफ्ना लागि पार्टी अध्यक्ष वा प्रधानमन्त्रीको बाटो सधैँका लागि बन्द भएको बुझेर त्यतातिरको इच्छा प्रकट गर्नुभएको हो ?
म जुनसुकै बेला पार्टी अध्यक्ष बन्न सक्छु, प्रधानमन्त्री पनि बन्न सक्छु, ढोका बन्द छैनन् । म ७० वर्ष पनि पुगेको छैन । दुई वर्षपछि मात्र पुग्छु । तर, अहिलेको अवस्थालाई हेर्दाखेरी राष्ट्रपतिको पद, जो गौरव र गरिमामय पद छ, पार्टीमै काम गरेको मूर्धन्य व्यक्तित्वलाई त्यो जिम्मेवारी दियो भने संविधान कार्यान्वयन गर्न र देशकै निम्ति पनि राम्रो हुन्छ भन्ने मेरो अवधारणा हो । यो अवधारणाको बीचबाट सोचेर कतिपय साथीहरूले मलाई राष्ट्रपति बन्ने कि भनेर पनि सोध्न थाल्नुभएको छ । मैले पनि पार्टीले उचित मूल्यांकन गरेर राष्ट्रपतिको पद दिन्छ भने अस्वीकार गर्दिनँ भनेर साथीहरूलाई भनेको छु ।
वर्तमान राष्ट्रपतिले आफूलाई दोहोर्‍याउन चाहनुभएको छ नि त ?
राष्ट्रपतिको पद भनेको एकै व्यक्तिलाई दोहोर्‍याइरहनुपर्ने पद होइन । नयाँ–नयाँ राष्ट्रपतिको खोज हुन्छ । र, सिंगो राष्ट्रले पनि त्यस्तो चाहना व्यक्त गरिरहेको हुन्छ । यो कुरालाई ध्यानमा राखेर निर्णय लिइयो भने त्यो बढी महत्त्वपूर्ण होला ।
व्यक्तित्व र राजनीतिक पृष्ठभूमिका कारण राष्ट्रपतिका रूपमा तपार्इं सर्वस्वीकार्य हुनुहोला । तर, के स्वयं तपार्इंका पार्टी अध्यक्ष तपार्इंलाई राष्ट्रपति बनाउने पक्षमा हुनुहुन्छ ? त्यस्तो केही संकेत पाउनुभएको छ ?
यसबारेमा कतै पनि छलफल भएको छैन । नेतृत्व पंक्तिसँग पनि कुरा भएको छैन । हामीले कुनै सोच पनि बनाएका छैनौँ । यो केवल चर्चा–परिचर्चाका रूपमा आइरहेको कुरा हो । यसभन्दा बढी केही छैन ।